बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरीकाको राष्ट्रपतीमा बिजयी
Halloween and Ryan
ओबामा * 338
मेक केन * 163
(*जितेको या अग्रता हासिल गरेको)
538 जम्मा इलेक्टोर भोटमा राष्ट्रपती बन्न 270 इलेक्टोर भोट ल्याउनु पर्नेहुन्छ ।
- बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरीकाको राष्ट्रपती ४४औं हुने पक्का तथा उनका प्रतीपक्षी जन मेककेनले उनलाइ फोनबाट वधाइ ज्ञापन ।
- बर्तमान राष्ट्रपती जर्ज बुसद्वारा बराक ओबामालाइ बधाइ तथा वाइट हाउसमा स्वागत।
- बराक ओबामाद्वारा सिकागोमा बिजयी भाषण
विश्वकै शक्तीसाली राष्ट्र अमेरीकामा चुनाबी गर्मी उत्कर्रसतमा पुगेको छ। नेपालमा हुंदा आफू यता, त्यसै भोट हाल्न पाइएन, आफू नेपाली नागरीक भएकोले याहा पनि भोट हाल्न पाइएन तर चुनाबी प्रक्रीया भने निकै नजिक बाट हेरें। चुनाबको पहिलो परिणाममा ओबामाले खाता खोलेका छन। New Hampshireको सानो गाउं Dixville Notch मा २१ भोटर छन जसमा १५ भोट ओबामाले पाए बने ६ भोट मेक केन ले पाए। त्यहा अघिल्लो पटक जर्ज बुसले जितेका थिए। पोलबाट ओबामाले जित्छन भने पनि भोट बाट अब ओबामाले जित्ने छनक देखिएको थियो।
पोलले २००४मा जन क्यारीले जित्छन भनेको थियो तर जित जर्ज बुसले। त्यसैले यस पटक सबै समाचार एजेन्सीले बढो साबधानी पुर्बक पोल बटुलेका थिए। चुनाबको नतिजा जे आए पनि इतिहास रचीने भएको छ। ओबामाले जिते सबै भन्दा कान्छो तथा प्रथम काला राष्ट्रपती बन्ने छन भने मेक केनले जिते प्रथम पटक जित्ने सबै भन्दा बुढा राष्ट्रपती बन्ने छन भने सेरा पेलीन पहिलो महिला उपराष्ट्रपती बन्नेछिन। चुनाबी मतगणना हेर्नेहो भने ओबामाले राष्रपतीको छाता ओड्ने पक्का छ।
United States को केही ऐतिहासकि तथ्य
- सन 1789 मा पहिलो राष्ट्रपती निर्वाचन ( सबै निर्बिरोध निर्बाचित)
- सन 1865 मा काला जातीले भोटहाल्ने अधिकार पाएका
- सन 1920 मा महिलाले भोटहाल्ने अधिकार पाएका
- भोट हाल्ने उमेर 18 बर्ष या माथी
- राष्ट्रपती उमेदवार हुने उमेर 35 बर्ष या माथी
नेपालबाट हेर्दा सात समुन्द्र पारिको देश भएपनि, यो यौटा देशको नेतृत्वले पुरै विश्‍वलाई असर गर्ने भएकोले:
ओबामालाई बधाई !!
अनि उनको कार्यकालमा सम्पूर्ण विश्‍व आर्थिक मन्दि बाट उत्रेर समृद्ध र शान्तिपुर्ण रहोस भन्ने कामना पनि ।
How come Obama won with landslide?
Its barrack amazing.